Xaqiiqada Virtual - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Mobile, Falanqaynta
Tikniyoolajiyadda xaqiiqda dhabta ah waxay been abuurtaa waayo-aragnimo wax u dhimeysa isticmaale kasta oo ka dhigaya iyaga inay ogaadaan inay la falgalayaan jawigooda dijitaalka ah ee dhabta ah iyo sidoo kale abuurista jilitaanka nolosha dhabta ah. Si aad u noqotid dad badan, xaqiiqda dhabta ah waxay u abuuraysaa adduun dalxiis u adeegsadayaasha laakiin waxaa loo qaabeeyey qaab ay farqiga u dhexeeya dunida dhabta ah iyo kan istiraatiijiyaddu aad u adag tahay in la sheego. Kumbuyuutar la abuuray, jilitaan macmal ah ama madadaalo qaar ka mid ah xaaladaha nolosha dhabta ah waa waxa dhabta ah ee dalku yahay. Aragtida iyo maqalka isticmaalaha ayaa la moodayaa ugu horreyn, iyaga oo ku dhex milmaya adduunyo gebi ahaanba ka duwan.
Sida aag dagaal, gurigaaga ayaa u rogi doona goob lagu dagaallamo oo leh jawi 3D ah oo aad dhex mari doontid, quusin doontid isla markaana la falgeli doontid caawimaadda qalabka qalabka gaarka ah. Si aad uhesho VR, qofku wuxuu ubaahanyahay headset VR ah iyo barnaamijka VR, taas oo kadhigaysa qalabka iyo softiweerka. Qalabka wax lagu dhejiyo ee loo yaqaan 'VR headset' wuxuu ku habboon yahay indhahaaga iyo madaxaaga korkiisa, wuxuuna aragga kaa jarayaa booska jireed ee aad degan tahay. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad la kulanto xaqiiqda ka duwan jawiga kombuyuutarka lagu soo saaray. VR waxaad ku dalxiis tagi kartaa Louvre, waxaad ku kori kartaa Grand Canyon, waxaadna quusin kartaa ciyaar fiidiyoow adiga oo aan ka tagin sariirtaada. Waa mid aad u mashquulsan sidaa darteedna waxaa loo tixgeliyaa waxa ugu weyn ee ku xigga warshadaha teknolojiyadda. Qeybta madadaalada, laga soo bilaabo filimada ay sameysay Hollywood ilaa qibradaha masraxa iyo riwaayadaha tooska loo sii daayo, VR waxay noqotay meel laga daawado warbaahinta kugu hareeraysan. Si loo soo qabto sheekooyinkan VR, kaamirooyin iyo aalado cusub ayaa la dhisayaa nambarkuna marwalba wuu u kordhayaa soo dejintooda iyo baahinta tooska ah. Dhawaan waayo-aragnimadani waxay umuuqdaan kuwo run ah mana ahan filimo dambe. Qeybta ciyaarta ayaa ah meesha ugu badan ee VR taas oo siineysa naqshadeeyayaasha xorriyadda ay ku qaadan karaan ciyaaraha meelo cusub oo cajiib ah ayna ku beddeli karaan joystico-yada caadiga ah iyo badhamada kantaroolayaasha awood u leh inay taabtaan oo ay wax gaaraan. Naqshadayntu waxay sidoo kale noqotay mid si fudud ula socota VR halkaas oo nashqadeeyayaashu u adeegsan karaan aalado macmal ah si ay u dhisaan guri dhab ah ama nashqadeeyaan baabuur iyo qeybaha kale ee gawaarida sida ay ahaayeen kuwa dhabta ah. Xakameeyayaasha sida-socodka ah iyo barnaamijyaduba waxay durba VR ka dhigayaan garoon cayaareed oo la yaab leh goor dhowna kuwani waxay muhiim u noqon doonaan dhammaan shaqada naqshadeynta. Xaqiiqda dhabta ah ayaa ah mid aad u liidata in qaybta guryaha, xitaa ka fog fog, mid ayaa si fudud ugu socon kara guriga ay rabaan inay u muuqdaan inay iyaguba halkaas joogeen ama ku habboon yihiin qalabka guryaha ee aad jeceshahay si aad u aragto sida ay u ekaan doonto. Kuwani dhammaantood waxay ku noqon lahaayeen suurtagal VR. waxay u oggolaan laheyd adeegsadayaasheeda inay lug ku galaan dukaanka dharka ee noocyada kala duwan leh iyo xulashooyin ay isku dayaan goobta. Hada qiyaasi inaad fuuleyso Mount.Everest intaad fadhido guriga ama booqato meelaha caanka ah ama xitaa aad kuqabsaneyso xusuustaada kamarad 360-degree ah. VR-gu wuxuu dunida ugu qaabeyn karaa qaab muuqaal ah oo cajiib ah, kiimiko, daawo, cirbixiyeen ama fiisikis, jilitaankeedu wuxuu ku bixin karaa naqshadaha, farsamooyinka, iyo fikradaha goob kasta.
Wax kastoo ay qaali tahay, khatar ama aan macquul ahayn dhab ahaan, xaqiiqda dalwaddii ayaa jawaab ah. Xaqiiqda dhabta ah waxay noo oggolaaneysaa inaan qaadno khataro macquul ah si aan ula kulanno adduunka dhabta ah, laga bilaabo dhakhaatiirta qalliinka ku tababaran ee caafimaadka illaa tababbarka duuliyeyaasha dagaalka, VR ayaa si caadi ah u socota. VR waxaa lagu hirgelin karaa nooc kasta oo warbaahin ah ha ahaato fiidiyow ama filim laakiin taasi waxay suurtagal ku noqonaysaa oo keliya qalabka VR sida muraayadaha indhaha iyo sameecadaha ay soo saaraan shirkadaha sida OnePlus, Samsung iyo Oculus Rift. Xaqiiqda Virtual hadda kuma koobna oo keliya isku xirnaanta bulshada iyo ciyaaraha fiidiyowga ee loo soo saaray jawi muuqaal ah laakiin leh baaxad ballaaran. Xaqiiqda dhabta ah waxay adeegsaneysaa teknoolojiyad fara badan si ay u gaarto hadafkeeda ah inay bixiso jawi muuqaal ah oo leh jawaabaha ku habboon waqtiga dhabta ah tanina waa farsamo adag oo farsamo oo ay tahay in lagu xisaabiyo garashada iyo aragtidayada. Xaqiiqda dhabta ah iyo xaqiiqda la kordhiyay, haddii si wadajir ah loo wada shaqeeyo, waxay si wax ku ool ah u beddeli kartaa sida aan u aragno ulana xiriirno adduunka iyo waxyaabaha kale.